Where do I buy WLAN cards are supported by Aircrack in yangon? - MYSTERY ZILLION
Where do I buy WLAN cards are supported by Aircrack in yangon?
September 2011 edited September 2011 in Network Accessories Sale
ကျွန်တော် backtrack4နဲ့ wifi hack တာကိုစမ်းကြည့်ချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် aircrack ကို support လုပ်တဲ့ WLan card ကို ၀ယ်လို့မရ ဖြစ်နေတယ်။ windows မှာရော linux မှာပါသုံးလို့ရတဲ့ အမျိုးအစားကိုလိုချင်တာပါ။ ကျွန်တော် သိထားတာကတော့ Dlink DWL-G550, Netgear WG311T , TP Link TL-WN651G cards တွေက ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းကဆိုင်တွေမှာ လိုက်ရှာတာမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရန်ကုန်က ဘယ်ဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ တခြား support လုပ်တဲ့ card အမျိုးအစားတွေ ရှိရင်လည်းသိချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ၀ယ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့။ သိသူများရှိရင်ကူညီပေးပါခင်ဗျာ။ :ar!
TP-Link ကိုတော့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းက Neo Tech မှာ ရနိင်မယ်ထင်တယ်
Where can i get backtrack4bootable CD/DVD. For downloading, it is impossible for me. I used CDMA network. Let me know file size and where i can get.
backtrack4file size is about 1.5 GB and you can buy that at excellent, active and national computer software sellers.
can I use backtrack4with netgear wg111v3?